Overactive Bladder (ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သိမှတ်စရာများ ) - Hello Sayarwon
Overactive Bladder (ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သိမှတ်စရာများ )
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Overactive Bladder (ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သိမှတ်စရာများ )
Overactive Bladder (ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သိမှတ်စရာများ ) ကဘာလဲ။
ဆီးမထိန်းနိုင်တဲ့ရောဂါဆိုတာ ဆီးရုတ်တရက် မကြာခဏသွားတတ်တဲ့ ဆီးအိမ်-သိုလှောင်မှု ပြဿသနာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြသနာဟာ ရပ်တန့်ဖို့ခက်ခဲပြီး ဆီး အမြောက်အများဆုံးရှုံးမှုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကြွက်သားအတော်များများက ဆီးသွားခြင်းမှာ ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ အတွက် ဒါကပြဿသနာဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာအများအပြားဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဆီးအိမ်နှင့်ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေး, ပိတ်ဆို့ခြင်းများနှင့်ကြွက်သားပြဿနာများအားလုံးက ဆီးအိမ်တုံ့ပြန်မှုလွန်ကဲခြင်းပြသနာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
Overactive Bladder (ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သိမှတ်စရာများ ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဆီးမထိန်းနိုင်တဲ့ရောဂါက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလူသန်းပေါင်းများစွာမှာ သက်ရောက်နေပါတယ်။National Association for Continence(NAFC) ၏အဆိုအရ, 40 အသက်အရွယ်အထက်လူကြီးများတွင် ငါးဦးမှာ တဦး ဆီးအိမ်တုံ့ပြန်မှုလွန်ကဲခြင်းပြသနာ သို့မဟုတ် ဆီးသွားမှု ကြိမ်နှုန်းများခြင်း ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်း လက္ခဏာတွေရှိနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ဤလူများရဲ့ ရှစ်ဆယ့်ငါးရာခိုင်နှုန်းကအမျိုးသမီးများဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် အမျိုးသမီး လေးဦးမှာ တဦးက တစ်ကြိမ်မဟုတ်တစ်ကြိမ် ဆီးယိုစိမ့်မှုပြသနာ တွေ့ကြုံရပါတယ်။
သို့ရာတွင် သင့်ရဲ့ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေ လျှော့ချကာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက် သင့်ဆရာဝန်နှင့်အတူဆွေးနွေးပေးပါ။
Overactive Bladder (ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သိမှတ်စရာများ ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
– ဆီးရုတ်တရက်သွားချင်သလို ခံစားရပြီး ထိန်းထားဖို့လည်းခက်ခဲနေမယ်
– ဆီးသွားပြီးရင်လည်း ဆီးကျန်နေသလိုခံစားရမယ်။ ဒါ့အပြင် ဆီးတစက်စက်ကျတာကိုလည်း ခံစားရပါမယ်။
– ဆီးမကကြာခဏသွားတတ်ပါတယ်။24 နာရီအတွင်း များသောအားဖြင့်ရှစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသွားတတ်ပါတယ်။
– (nocturia) ညအခါအခါနှစ်ကြိမ် သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်ထက် ပိုနှိုးပြီး ဆီးသွားတတ်ပါတယ်။
သင်ဆီးသွားဖို့ ခံစားရသည့်အခါ အိမ်သာသွားလို့ ရနိုင်ပေမဲ့, မမျှော်လင့်ဘဲမကြာခဏဆီးသွားခြင်းများနှင့်ညအချိန်ဆီးသွားခြင်းတွေက သင့်ဘဝကို အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အသက်ကြီးတဲ့ လူကြီးတွေမှာ ဖြစ်လေ့ရှိသော်လည်း,ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းပြသနာက ဇရာရဲ့ ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေက သင့်ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးနေပြီဆိုရင် အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာများနှင့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ အတွက်ရွေးချယ်စရာများစဉ်းစားပါ။ သင့်ကို အကူအညီပေးနိုင်တဲ့ ကုသနည်းများရရှိနိုင်ပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာတွေရှိရင်ပြသင့်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တည်ဆောက်ပုံမတူကြတဲ့ အတွက် သင့်အတွက်သင့်တော်မယ့် အခြေအနေကို ဆွေးနွေးပါ။
Overactive Bladder (ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သိမှတ်စရာများ ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းကို အပြည့်အဝနားမလည်သေးပါ။ သင်ဆီးမသွားချင်တဲ့အချိန်မှာ ဆီးအိမ်ကြွက်သား တုံ့ပြန်မှုများလာပြီး ညှစ်ချလိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ဆီးတဖြည်းဖြည်းပြည့်လာတဲ့အခါ ဆီးအိမ်ကြွက်သားက ဖြေလျော့ပေးပါတယ်။ ဆီးအိမ်တဖြည်းဖြည်းတင်းနေတာနဲ့ ဆီးအိမ်ထက်ဝက်ခန့်မပြည့်ခင်မှာ ဆီးသွားချင်နေတဲ့ခံစားချက်ရရျှိပါတယ်။ လူအများစုဟာအိမ်သာသွားဖို့ အဆင်မပြေအချိန်မှာ ဤကနဦးခံစားချက်ကို အလွယ်တကူမေ့ထား အောင့်ထားနိုင်ပါတယ်။
သို့သော် ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းပြသနာဖြစ်နေတဲ့သူမှာ ဆီးအိမ်ကအမှန်တကယ်ပြည့်နေတာထက် ပိုပြည့်နေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ ဆီးအိမ်မပြည့်ခင် သင်အိမ်သာမသွားလိုသေးချိန်မှာ စောစောစီးစီး ကျုံ့ညှစ်လိုက်ပါတယ်။
ဒါဟာသင်ရုတ်တရက်အိမ်သာ သွားဖို့ လိုအပ်စေပါတယ်။
ကိစ္စအများစုတွင်ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းပြသနာ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းမသိရပါ။ဤအရာကို overactive bladder syndrome လို့ခေါ်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာများက စိတ်ဖိစီးချိန်များတွင်ပိုမိုဆိုးရွားစွာ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာများကို ကဖိန်းဓါတ်ပါတဲ့ လက်ဖက်ရည်, ကော်ဖီ, cola နှင့်အရက်တို့က, ပိုမိုဆိုးရွားစေပါတယ်။
အချို့ကိစ္စများတွင် ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းပြသနာ ရောဂါလက္ခဏာများက nerve- သို့မဟုတ်ဦးနှောက်-ဆက်စပ်ရောဂါတခုအဖြစ် ရှုပ်ထွေးစွာ ဖွံ့ဖြိုး:တတ်ပါတယ်။
သင်သည် ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးကူးစက်မှုသို့မဟုတ် ကျောက်တည်မှု ရှိပါကလည်းအလားတူရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ထင်ထင်ရှားရှားပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီပြသနာတွေက ဖြစ်စေတဲ့အချက်တွေသိနေတဲ့အတွက် ဒီအခြေအနေတွေကို ဆီးမထိန်းနိုင်မှုရောဂါစုလို့တော့ သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။
Overactive Bladder (ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သိမှတ်စရာများ ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သင်အသက်အရွယ်ကြီးလာတာနဲ့ သင် ဒီရောဂါ ဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင့်မှာ ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်းနှင့်ဆီးချိုရောဂါကဲ့သို့သောရောဂါနှင့်မမှန်မှုများ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း မြင့်မားစေပါတယ်။ ပြီးတော့ဒီအရာတွေကလည်း ဆီးအိမ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ထိခိုက်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လူအတော်များများက ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြသနာ ဥပမာ, လေဖြတ်ပြီးနောက်သို့မဟုတ်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်အတူ ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းပြသနာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေများအတွက် , အရည်သောက်သုံးချိန် , အချိန်ဇယားနဲ့သောက်သုံးခြင်း , အောက်ခံစုပ်ယူမှုကောင်းတဲ့အဝတ်, နှင့် bowel programs တွေနဲ့ စီမံခန့်ခွဲနိင်ပါတယ်။
အချို့ ဒီပြသနာရှိသူတွေက ဝမ်းမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ပြဿနာများရှိတတ်ပါတယ်။ သင့်မှာလည်း ပြဿသရှိလျှင်သင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။
Overactive Bladder (ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သိမှတ်စရာများ ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်မှာ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ဆီးသွားချင်စိတ်တွေ ရှိရင် သင့်ဆရာဝန်ကသင့်ဆီးမှာ ရောဂါကူးစက်ခြင်း သို့မဟုတ်သွေးပါမပါ သေချာစေရန်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ သင့်ဆရာဝန် သင်ဆီးသွားတဲ့အခါသင့်ရဲ့ဆီးအိမ်ထဲမှာ လုံးဝကူန်နေမနေသေချာအောင်စစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင်အထောက်အထားခိုင်လုံအောင် သဲလွန်စကိုရှာပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါစစ်ဆေးမှုတွေမှာ အောက်ပါတို့ပါဝင်ပါလိမ့်မယ် :
ရောဂါကူးစက်မှု , သွေး သို့မဟုတ်အခြားမူမမှန်သဲလွန်စတွေရှာဖွေဖို့ ဆီးနမူနာယူပါတယ်။
အာရုံခံပြဿနာများသို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောတုံ့ပြန်မှုတို့ အတွက် အာရုံကြောဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်ပါတယ်။
သင့်ဆရာဝန်က သင်ဆီးအိမ် တဖြည်းဖြည်းနှင့်လုံးဝကုန်စင် ညှစ်ထုတ်နိုင်မှုစွမ်းရည်ကိုအကဲဖြတ်ရန် ရိုးရှင်းတဲ့ urodynamic test တွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဤစမ်းသပ်မှုတွေက များသောအားဖြင့်အထူးကုသမားတော်တစ်ဦးကို လွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုတွေမှာ ပါဝင်တာတွေကတော့ :
ဆီးအိမ်၌ ဆီးကြွင်းကျန်မှု တိုင်းတာခြင်း။ သင်ဆီးသွားပြီးတဲ့အခါ ကျန်နေတဲ့ဆီးတိုင်းတာရန်သင့်ဆရာဝန် ဆီးအိမ်ကို ultrasound scan ရိုက်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် ဆီးပြွန်မှတဆင့် သင့်ဆီးအိမ်ထဲသို့ပါးလွှာသောပြွန် ထည့်သွင်းတိုင်းတာခြင်း တို့လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဆီးစီးဆင်းမှုနှုန်းကိုတိုင်းတာခြင်း။ သင့်ရဲ့ဆီးပမာဏနဲ့ မြန်နှုန်းတိုင်းတာရန်, သင်ကို uroflowmeter ထဲဆီးသွားခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒီကိရိယာက သင့်ရဲ့စီးဆင်းမှုနှုန်းအပြောင်းအလဲ မှတ်တဲ့ဂရပ်ထဲသို့ဒေတာကိုဘာသာပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆီးအိမ်ဖိအားစမ်းသပ်ခြင်း။ Cystometry က သင့်ရဲ့ဆီးအိမ်နှင့်ဆီးအိမ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဖိအားတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ ဒီစမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်း, သင့်ရဲ့ဆရာဝန်က့ပါးလွှာတဲ့ပြွန် (ပြွန်) ကိုအသုံးပြုပြီး ရေနွေးနှင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းသင့်ရဲ့ဆီးအိမ်ကို ဖြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ဖိအား-တိုင်းတာတဲ့ အာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူနောက်ထပ်ပြွန်ကို သင့်ရဲ့စအိုတွင်း သို့မဟုတ် သင်က အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်နေလျှင်, ယောနိထဲထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဤစစ်ဆေးမှုကို ယေဘုယျအားဖြင့်ကျောရိုးကိုထိခိုက်မှုရှိဖူးတဲ့ အာရုံကြောရောဂါရှိတဲ့ လူတွေမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
သင့်ဆရာဝန်က စမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးကုသမှုများ , ကိုအကြံပြုပါလိမ့်မယ်။
Overactive Bladder (ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သိမှတ်စရာများ ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဒီအရာကတော့ ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းပြသနာ ကုသစဉ်အတွင်း ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ထိရောက်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းမရှိပါဘူး။
ဆီးစပ်ကြမ်းပြင်ကြွက်သားလေ့ကျင့်ခန်း: Kegel သင့်ရဲ့တင်ပါးဆုံတွင်း ကြွက်သားများနှင့် sphincter ကိုခိုင်ခံ့စေပါတယ်။
ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓါကိုယ်အလေးချိန်: သင်ဟာ အဝလွန်သူဆိုရင်, အလေးချိန်လျော့ချတာဟာ သင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ဆီးကျန်တာကိုလည်းကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
သင့်ဆရာဝန်ကနေ သင်သောက်သုံးတဲ့အရည်ပမာဏနဲ့ သောက်သုံးချိန်တွေကို ညွှန်ကြားအကြံပြုပေလိမ့်မယ်။
ဆီးအိမ်ကြွက်သား ပြေလျော့စေတဲ့ ဆေးဝါးများက ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းပြသနာ ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာများကို သက်သာရာရစေတတ်ပြီး ဆီးကျန်တဲ့ ပြသနာကိုလျှော့ချမှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ယင်းဆေးဝါးများကတော့ :
Botulism ဖြစ်စေတဲ့ဘက်တီးရီးယားကနေထုတ်ယူထားတဲ့ ပရိုတိန်းBotox လို့ခေါ်တဲ့ OnabotulinumtoxinA, ပမာဏအနည်းငယ်ကို ဆီးအိမ်တစ်ရှူးတွင်းသို့ တိုက်ရိုက် ထိုးသွင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပရိုတိန်းက ကြွက်သားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ခဏတာ ပျော့သွားစေပါတယ်။
လက်တွေ့သုတေသနတွေကတော့ ပြင်းထန်တဲ့ ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းတွေမှာ အသုံးဝင်တယ်လို့ ပြသပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အာရုံကြောရောဂါမရှိတဲ့ လူတွေအတွက်ဒီဆေးကို အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနကအတည်ပြုမပေးပါဘူး။ အဆိုပါဆေးသက်ရောက်မှုဟာ ယာယီသာဖြစ်ပြီး ခြောက်လမှ ကိုးလထိ ကြာတတ်ပါတယ်။
ဤဆေးက လူကြီးများနှင့် အခြား အခြေအနေတွေကြောင့် အားနည်းနေတဲ့လူတွေမှာ ဆီးကုန်အောင်မစွန့်နိုင်တဲ့ပြသနာကို ပိုဆိုးလာစေပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ Botox ကုထုံးကို စဉ်းစားနေလျှင် ဆီးအိမ်တင်းလို့ဆီးသွားချင်တဲ့အခါ ဆီးပိုက်ထည့်ဖို့ကိုလည်း လက်ခံနိုင်ရပါမယ်။
သင့်ရဲ့ဆီးအိမ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ အာရုံကြောထိန်းညှိပေးခြင်းက ဆီးအိမ်တုံ့ပြန်မှု ပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ကုထုံးတစ်ခုမှာ သေးငယ်တဲ့wire ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ သင့်မြီးညှောင့်ရိုးကနေဖြတ်သွားပြီး bladder ကို ထိန်းချုပ်တဲ့ sacral အာရုံကြောနှင့်နီးစပ်သောနေရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
ခွဲစိတ်ကုသမှုကတော့ ယာယီဝါယာကြိုးတစ်ချောင်းကို အစမ်းထည့်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် permanent electrode ကို battery-powered pulse generator ခွဲစိတ်ထည့်သွင်းမှုမလုပ်ခင် တပ်ဆင်ပြီး ကြာရှည်စမ်းသပ်ပါတယ်။ နောက် သင့်ဆရာဝန်က pacemaker လုပ်ပုံနဲ့ဆင်တူအတိုင်း သင့်ရဲ့ဆီးအိမ်ကို လျှပ်စစ် Impulsesကို ဝါယာကြိုးနဲ့ချိတ်ဆက် ပို့လွှတ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီကုထုံးက အောင်မြင်စွာသင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကို လျော့နည်းစေလျှင်, ဝါယာကြိုးကို သင်၏အသားအရေအောက်တွင်ထားရှိတဲ့ သေးငယ်တဲ့ဘက်ထရီကိရိယာမှာ ချိတ်ဆက်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ကုသနည်းက အခြားကုသမှုတွေကို မတုံ့ပြန်သောလက္ခဏာများနှင့်လူတွေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်ကတော့ ဆီးအိမ်ရဲ့သိမ်းဆည်းနိုင်သောစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ဆီးအိမ်အတွင်းရှိဖိအားကိုလျှော့ချဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများက ဆီးအိမ်နာကျင်မှုကို သက်သာအောင် ကူညီလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အခြားကိစ္စတွေကတော့ :
ဆီးအိမ်သိုလှောင်မှုပမာဏ တိုးမြှင့်ဖို့ခွဲစိတ်ခြင်း ဒါဟာတော့ သင့်ရဲ့ဆီးအိမ်ကိုအစားထိုးဖို့ သင့်ရဲ့အူသိမ်အူမ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဖဲ့အသုံးပြုပါတယ်။ ဤနည်းက အခြားကုသမှုတွေကို မတုံ့ပြန်သောလက္ခဏာများနှင့်လူတွေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဤခွဲစိတ်မှုပြုပါက, ဆီးပေါက်ဖို့ ဆီးပြွန်တစ်ခုကို ကျန်ဘဝတစ်လျောက်လုံး မကြာမကြာထည့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးအိမ်ဖယ်ရှားပစ်ခြင်း ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းရဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပြီး ဆီးအိမ်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ဆီးစုဆောင်းရန်အရေပြားပေါ်မှာအိတ်တစ်ခု ပူးတွဲထားရှိတာမျိုးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံအပြောင်းအလဲများ နှင့် အိမ်တွင်းဆေးဝါးများ
ဆီးမထိန်းနိုင်တဲ့ ပြသနာကို ကူညီနိုင်တဲ့လူနေမှုပုံစံအပြောင်းအလဲများ နှင့် အိမ်တွင်းဆေးဝါးများကဘာတွေလဲ ?
ဤအရာတွေကတော့ သင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုလျော့ချပေးနိုင်တဲ့ လူနေမှုပုံစံအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်းမာသော ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းပါ: သင်က အဝလွန်သူဆိုရင် ကိုယ်အလေးချိန်ကျချိန်မှာ သင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ အဝလွန်သူတွေက ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အတူတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေခြင်းငှာအရာစိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ဆီးမထိန်းနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်များပါတယ်။ အလေးချိန်ကျရင်ေ့တိုးတက်မှုရှိပါတယ်။
အရည်သောက်သုံးချိန် ဇယားကိုလိုက်နာပါ: သင်နေ့စဉ် အရည် ဘယ်လောက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာ သင့်ဆရာဝန်ကိုမေးပါ။ လူအများစုဟာ သူတို့အရည်သောက်သုံးမှုကို ၂၅ % လျှော့ချနိင်တာနဲ့ ဆီးအိမ်ရောဂါလက္ခဏာတေတွေ့ကြုံခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
ကဖိန်းဓါတ်နှင့်အရက်ကိုရှောင်ပါ: ကဖိန်းနှင့်အရက်ယမကာတွေက သင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေပိုဆိုးတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ကို ရှောင်ရှားရန်ရပါမယ်။
သင်သိလိုတဲ့ မေးခွန်းများရှိပါက ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Overactive bladder. http://www.healthline.com/health/overactive-bladder Accessed 19 Feb, 2017.
Nocturia (ညဘက် ဆီးသွားလွန်ရောဂါ)
Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) (ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း)